ရွာသားအသစ်ကလေးကို ဝင်ခွင့်ပြုပါနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ရွာသားအသစ်ကလေးကို ဝင်ခွင့်ပြုပါနော်
Posted by Mr.ဝက်ကြီး on Jul 17, 2012 in My Dear Diary | 33 comments
အားလုံးသော ရွာသူရွာသားအပေါင်းကို မင်ဂါဘာ… (Rocker အသံဖြင့်) လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဘေးထိုင်ဘုပြောတတ်တဲ့ မောင်ဘုဂလန့် ဖြစ်ပေတယ်။ အနှီ မန်းဂေဇက်ရွာဂျီးနှင့် မစိမ်းလှတဲ့ စာဖတ် ပိတ်သတ် တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါဘေဒယ်။ ရွာထဲမှာ စာဖတ်ဖြစ်နေတာတော့
ကြာပါဘီ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပိုစ့်တွေကြောင့် ဘေးထိုင်ဘုပြောချင်တဲ့ စိတ်ကလေးနှင့် (ဝါသနာလေးကလည်း ပါသကိုးဗျ) ဝင်ခွင့်တောင်းခံရခြင်းလည်းဖြစ်ပေဒေါ့ဒယ်။
ကျနော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရေးအသားပိုင်ရှင်ကတော့ ဟို အူးသန်းရွှေ အဗာတာပုံ ကားတားကားတားနဲ့ မစ္စတာအောင်ပုဖြစ်ပါဘေဒယ် (ဖားထားတာလေ အဲ့လူဂျီးကလွယ်တာဟုတ်ဖူးရယ် သိပ်အဆဲသန်တာကလား) တစ်ခြားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စာရေးသူတွေလည်း အများအပြားရှိပါသေးတယ်။
ကိုဘိုက်ကလေးတို့ မဟာရာဇာအံဇာတုံး(ခ) ခြောက်မျက်နှာတို့
ကိုပေ၊ ကိုပေါက် ၊ ကိုဂီ ၊ ဝါးတားမဲလုံး(ခ) ဖရဲသီး၊ မ မနော၊ အရီးလတ်၊ အန်တီနု ၊ အူးအူးဘလက် ၊ ကထူးဆန်း ၊ သစ္စာလင်း ၊ မခိုင်ခိုင် ၊ ကိုအောင်တိုက် စသည်ဖြင့် အားဂျီးပါဘဲ ….
ဒါတောင် အမည်မေ့နေတဲ့သူတွေပါတေးဒယ် (စိတ်အဆိုးရဘူးနော်) :grin: အားလုံးပဲ တားတားလေးကို အသိအမှတ်ပြုပီး ဘုပြောခွင့်လေး ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်နော် ။ ဘုပြောတယ်ဆိုတာလည်း မနာလိုမရှုစိမ့်တဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကောင်းစေချင်တဲ့
စေတွေနဲ့ (စေတွေ=စေတနာတွေ) ၊ဂရုဏာဒေါသောဆိုပါတော့ဗျာ ဟိဟိ။ တားတားက ပေါ်တင်တည့်တည့်ပဲ ပြောတတ်တယ်၊ ကွေ့ကာဝိုက်ကာနဲ့ လှည့်ပတ်ပီးပြောတတ်ဘူးဗျ (အဲ့ဒါ တားတားရဲ့ အားနည်းချက်) ၊ တစ်ချို့တွေကရှိတယ် တားတားရဲ့ အပေါင်းအသင်းထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်၊ ရှေ့တစ်မျိုးကွယ်ရာတစ်မျိုးနဲ့ ၊
တားတားက အဲ့ဒါမျိုးဆို အားဂျီးမုန်းတာ၊မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး ဒဲ့ဘဲပြောတတ်တယ် ၊ အိညောင်ပန်းညောင်နဲ့ လေချိုမသွေးတတ်ဘူး၊ တားတားရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်းပြောတယ် မင်းက ဘုဂလန့်ကောင်ပဲတဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ၊ကျနော့်ကို အဲ့လိုပြောလို့ စိတ်မဆိုးပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့စိတ်ထဲရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ရလို့ ကျေနပ်တယ်၊ ကျနော့်ကိုဝေဖန်ရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရပါတယ် လုံးဝ စိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူးနော်။
Mr.ဝက်ကြီး has written2post in this Website..
View all posts by Mr.ဝက်ကြီး →
ဟီးးးးးးးးးစတာနော် အတည်ပါ ခင်လို့
ဘုဂလန့်ရှိုဒေါ့..အူးဘဇင်းဇောက်နဲ့ တွဲလို့ ရဘီ..
လန့်ပါနဲ့နော် တားတားက ခင်တတ်ပါဒယ်ဂျ
တစ်ခါတစ်လေ စကားပြောမတတ်တာပဲရှိဒါ ဟိဟိ
တိုတို ဘိုက်ကလေးက ဘာလို့ ဂိန်တာလဲဟင် တားတားမတိလို့နော် မေးကျိဒါ
ခွင့်ပြုပေးဒဲ့ နွေဦးကို ကျေးကျေးဘာနော်
အီးအီးပန်းရတာ (ဗျစ် .. ဗလစ် .. ဗျစ် ဗျစ်) ရိုးသွားလို့ ..
ခု .. ဂိန် .. ဂိန် .. ဖြစ်သွားဒါဘာ ..
ဒါနဲ့ အသစ်ခလေး ဘန့်ဂလု .. ဘုဂလန့်ကို ကြိုဆိုပါတယ်နော့ ..
ဂွစာတိုက်၍ ကန့်လန့်များစွာပြောနိုင်စေသတည်း…. အဟွပ်..ဟွပ်..။
သူကြီးက ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောစရာမလို အတွင်းဝင်ထိုင်ပြီး စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ပြောလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါသည် ဆိုတော့ ဘေးထိုင်လေး ဖြုတ်လို့၇ပြီ… :grin:
တိုတိုဂျစ်ပစီရေ့ ဘုပြောရတာတော့ဝါသနာပါတယ်ဗျ၊ ဘောပြုတာတော့ ကြိုက်ဘူးနော် ဟိဟိ
ဟုတ်တဲ့ပါ စီဂျေဂျီး ကထူးဆန်းရေ့
အတွင်းထဲဝင်ထိုင်ပီးတော့ စည်းကမ်းရှိရှိ ဘုပြောပါတော့မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ကြေငြာမောင်းခတ်ပါတယ် ခင်ဗျားးးးးးးးးးးးးးး
ဘုဂလန့်ကိုချစ်စနိုးနဲ. ဘုဘု လို.ခေါ်မယ်နော်…အာဟိ….။
ဟိုနေ.ကတောင် ကျော်က ဘုဂလန့် လို.နာမည်ပြောင်းမလို.။သများအူးဒွားဘီ(ဟွင့်)။
(ငယ်ငယ်တုန်းကဘာတဲ့) ဘုဘုတည်ပြီးပြီလား(ထမင်းအိုး)၊ ဘုဘုတည်ချင်သေးလား၊(ရေနွေးအိုး)…..ဘုဘုတွေ ဘုဘုတွေ ချားရ၀ူး….အဟဲ..ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး…
အဲ့လာ ဘုဘုဟုတ်ဘူး ဘွတ်ဘွတ်
ဒီအရေးသား .. ဒီ နဲ့ …. ဒီလေသံကျပေါက်ကြည့်ရတာ ……. ဟိုဒင်းမှ ဟုတ်ရဲ့လား …….
နှစ်ကိုယ်ခွဲ ဇာတ်လမ်းရိုက်နေတယ် … အဟိ … ။
ဘုဂလန့်ကို ဘုတောလွှတ်တယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ဘုဘုရယ်
ဒါနဲ့ ဇဂါးမစပ် ပန်ပန်လေးဂရော ပုသလားဟင် မှန်မှန်ပြောနော် ဟိဟိ
ပုပုဆိုတာ ကလေးလေးကို ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တာလေ
မစ်စတာအောင်ပုကို ကြိုက်တယ် ဆိုဒေါ့… သူဘာကြိုက်လဲ သိရဲ့မဟုတ်လား
နာကလွဲပြီး အားလုံးကို ဘုပြောဇေဗျား…. ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ် ….
နာတော့ ဘု ဆိုရင် မိုက်ကယ်ဘု ပဲ မြင်တယ်…
ဒီတော့ မတူအောင် လန့်လန့် လို့ ခေါ်မယ်နော်…
လန့်လန့်ရဲ့ ဘုဂလန့် အရေးအသားတွေကို မကြာခင်မှာ တွေ့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ (ဘိလပ်ပြန် မောင်သောင်းဖေ လေသံနှင့် ရေးသည်။)
ခင်ဗျားလည်း ပုရင် အဲ့လိုပဲ ခေါ်မယ်နော်..
၀င်ခွင့်ကတော့ ပြုပါတယ် ဒါပေမယ့် ရွာ့လူကြီးတွေကို စည်ဘီယာဖောင် တင်ရပါတယ်…ဟီးဟီးဟီး
မှတ်ချက်။ ။ ဖောင်တင်ပြီးပါက ဖောင်ပြင်ခွင့်မစိ
ဒါကြောင့်မို့… ထင်တော့ထင်သား ….
သေချာပါတယ် သူမှ သူအစစ်ပါ…
ဟေ့ဟေ့ လန်.လန်. နဲ. လတ်လတ် နဲ.မျက်စိရှမ်းပြီးမှားနေလို. ကွိုင်ရှော့တွေတက်ပြီး ဓါတ်လိုက်နေဦးမယ်…။
ဘုဘု ရဲ.ဘုစာများကို စောင့်ပြီး ဘုပြောဖို. အသင့်ရှိပါဂျောင်းးး….ဂျောင်းးးး…ဂျောင်းးး…ဂျောင်းးးး…. (သတိ ပညာရှိနည်းနှင့်မဖတ်ပါနှင့်)
ဝင်ခွင့်ပြု၍ အားပေးဂျဒဲ့ ရွာသူရွာသား အကြီးအသေး မရွေး ၊ အရင့်အနုမရွေး ၊ အားလုံးဂို ကျေးဇူးအားဂျီးတင်ဘာဒယ်နော်
အမလေး ၀င်ခွင့်တောင်းလို့ပဲ … အထဲတောင်ရောက်နေပီ …
ဘန့်ဂလု .. ဂလု ..
ပြောရင်း သောက်ချင်လာပြီ (မှတ်ချက် ။ ။ ရေ …)
အပေါ်မှာလည်း ကြိုပြီးပြီ ..
ခု ထပ်ပြီး ကြိုလိုက်ပါတယ် ..
နို့ .. အနော့်ကို ခြောက်မျက်နှာလို့ ခေါ်မှန်းတောင် သိဒယ်နော့ …
ဘယ်ဒူ လဲကွ အရခွံလဲပလိုက်တာ
တိုတိုပေတို့ အဲ့လိုပြောနဲ့လေ ပေါ်တင်ကြီး